Taiwan: Takian’ireo niharan’ny lahatsary vetaveta nampiasàna “deepfake”ny hisian’ny lalàna vaovao manohitra ny herisetra ara-nofo any anaty habaky ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
"Tena nivaingana ny dona sy ny henatra tsapan'ireo niharany."
Voadika ny 18 Novambra 2021 4:32 GMT
(Fanamarihan'ny mpandika: Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny 21 Oktôbra 2021)
Ny tavan'ilay mpilalao sarimihetsika Mr. Bean navadika ho ny an'i Charlize Theron tao anatin'ny doka iray. Pikantsary avy ao amin'ny lahatsary YouTube an'i Fat Ninja
Nisarika ny sain'ny daholobe hisaina momba ny heloka bevava mifamatotra amin'ny AI (faharanitantsaina voatrolombelona) ny nisamboran'i Taiwan tsy ela akory izay an'ilay YouTuber malaza, Xiao Yu, Zhu Yuchen, noho ny filazana azy ho nivarotra lahatsary vetaveta deepfake (Fanamarihan'ny mpandika: lahatsary noforomporonina amin'ny fanapahana sy fametahana sarin'olona hafa ho amin'ny toeran'ny olona iray hafa) ahitàna ireo olona fantadaza, ary ny tsy fahavitàn'ny fanjakàna miady amin'ny herisetra ara-nofo any anaty habaky ny aterineto.
Ny 17 Oktôbra, voasambotra i Xiao Yu sy ny roa tamin'ireo mpiaramiasa aminy noho ny fivarotana lahatsary vetaveta novokarina tamin'ny fampiasàna AI nahitàna ireo olona fantadaza, tamin'ny alàlan'ny vondrona Telegram, hatramin'ny Jolay 2020. Ny 18 Oktôbra, navotsotra izy telo ireo rehefa nandoa onitra.
Olona 100 raha kely indrindra, isan'izany ireo pôlitisiàna, YouTubers, sy olona fantadaza, no niharan'ny heloka bevava natao tamin'ilay teknôlôjia vaovao. Napetaka tamina lahatsary vetaveta ny endrik'izy ireo ary namidy mba hahazoana vola. Toa hoe iray amin'ireo niharan'izany ny filohan'i Taiwan, Tsai Ing-wen, na dia tsy mivantana be aza ny fomba anasongadinan'ilay lahatsary fako azy no sady vetivety dia nofafàna tsy ho ao anatin'ny LINE, sehatra fandefasana hafatra malaza indrindra ao Taiwan.
Araka ny tatitra fanadihadiana tamin'ny volana Mey, nataon'ny famoahambaovao Miroor Media ao Taiwan, namokatra lahatsary fako maharitra 30 segondra ary apetrany ao anatina tranonkalam-betaveta ireo tarika mpamokatra, avy eo manasa ny mpijery handoa vola ho saran'ny maha-mpikambana mba hahafahana mijery azy manontolo, izay miafara amin'ny fandraisana azy ireo ho ao amin'ilay vondrona Telegram. Talohan'ny nahataitra ny sain'ny daholobe momba ny fisiany, olona 8.000 eo ho eo no azon-dry zareo tao anatina vondrona Telegram efatra samihafa.
Mba ho famatsiambola ireo famokarana vaovao, afaka manao safidy ireo mpikambana ka mametraka famandrihana manokana hahazo lahatsary vetaveta araka ny eritreretiny, na io ho an'ny nofinofiny, na noho ny antony toy ny fanalàna baraka ny olona niarahana fahiny. Vinavinain'ireo manampahefana ho nahazo tombony hatramin'ny 10 tapitrisa dolara Taiwan vaovao ry zareo ireo (manakaiky ny 360.000 dolara amerikàna) avy amin'ireo lahatsary vetaveta.
Hatramin'ny nahasamborana an'i Xiao Yu, marobe tamin'ireo niharany no niloa-peo . Huang Jie, mpanolotsaina avy ao an-tanànan'i Kaohsiung, no tena nanandra-peo tamin'ireo niharany. Maneho fanantenana izy hoe mety hampianatra ny olona momba ny fahavoazana ateraky ny heloka bevava atao amin'ny alàlan'ny AI ilay tranga:
“Tsy ilay ‘tena ianao’ no manao ilay fihetsika.”
“Ampiasaina ny tavanao satria mahafatifaty.”
“Dia hamavoinao ve ny lahatsary natao ho an'olondehibe?”
“Diso fisafidy endrika i Xiao Yu.”
Na dia tsy ilay olona tena izy aza no resaka, midika ve izany fa tsy misy herisetra ara-nofo ao anatiny?
Tamin'ny volana Mey, fony aho nilazana hoe nampiasaina ny tavako; dia noveheviko fotsiny ho lahatsary iray hafa mahatsikaiky fanalàna azy ilay izy. Saingy rehefa nijery ilay lahatsary aho, tsy nahavita nihomehy no sady naloiloy te-handoa. Avy eo aho nahatsiaro ho monamonaina. Raiki-tahotra. Tsy misy idiran'izay zavatra nokasain'i Xiao Yu, na nataony ho an'ny fahafinaretany fotsiny izany, na hitadiavana vola, fa tena nivaingana ny dona sy ny henatra tsapan'ireo niharany.
Marobe amin'ireo niharany, mpilalao sarimihetsika amina fandaharana fialamboly sy Youtubers, no nifandray tamiko manokana… hijoro izahay hiaraka hametraka fitoriana an'i Xiao Yu. Ary nampitandrina an'ireo izay mety mialokaloka any ambadiky ny solosaina any mijery ireo lahatsary. Ny sangy ratsinareo sy ny fanjifànareo dia nanohintohina ny hafa, hatrany hatrany.
Eto, izahay dia manainga ny pôlisy mba hanohy ny fanadihadiana ary manainga ny daholobe mba hanaraka maso akaiky ireo heloka bevava vaovao mifamatotra amin'ny AI. #aza-mitroka-sy-manaparitaka-ireny-lahatsary-ireny, ataovy ankivy ny olona manana fanakafizana mirefarefa amin'ny tany tahaka izany. #aza-mamorona-Xiao-Yu-iray-hafa sy manaparitaka kolontsaina veta tahaka izany.
Fa mbola zavadehibe kokoa, manainga ny mpanao lalàna izahay mba hijery akaiky ny #herisetra-ara-nofo-anaty-habaka-aterineto, hanisy fanovàna ny lalàna hanafaizana ireo amboadia masiaka…
Ny fomba fijerin'i Huang Jie dia mitovy amin'ny an'i Manaki, mpilalao sarimihetsika iray sorena noho ireo mpisehatra aterineto sasany nanamaivana ilay tranga na nandray an'ilay izy ho toy ny sangy mihitsy aza:
Zava-doza ny mahita ny tavanao apetaka hisolo ny an'ny hafa tahaka izany. Mety hino ny sasany hoe tena izy io. Tena sahiran-tsaina vokatr'ilay tranga aho ary tsy azo niverenan-dàlana ny dona nihatra tamin'ny lazako. Miangavy, aza raisina ho vazivazy izy ity. Maniry aho ny hisian'ny lalàna misimisy kokoa atsofoka hiatrehana ny olan'ny herisetra ara-nofo eny anaty habaky ny aterineto.
Kao Chia-yu, pôlitisiana sady mpikambana ao amin'ny Antoko Demaokratika Liampivoarana, izay niharan'ny heloka bevava nampiasàna AI, dia nanipika tao amin'ny Facebook fa amin'izao fotoana izao ao Taiwan, ny hany dingana araka ny lalàna azo hamaizana ireo heloka bevava vetaveta nampiasàna ny “deepfake” dia amin'ny alàlan'ny vesatra fanenjehana fanalàm-baraka, heloka bitika arahana fanasaziana azo lazaina ho maivana ihany. Nanaovany ady sisika ihany koa ny hanatsofohana lalàna vaovao hanakanana ireo heloka bevava henjana ampiasàna ny AI.
Tamin'ny 18 Oktôbra, tao anaty lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook, nanome toky i Tsai Ingwen, filohan'i Taiwan, fa hohenjanin'ny governemanta ny lalàna manafay ny fandisoana vaovao sy ireo lahatsary novokarina tamin'ny fampiasàna AI.